Waa Kuma Taliye kuxigeenka ciidanka Liyuuga ee madaxwayne Mustaf magacaabay. |
Waa Kuma Taliye kuxigeenka ciidanka Liyuuga ee madaxwayne Mustaf magacaabay.
Madaxwaynaha dawlada deegaanka Somaalida mudane Mustafe Cagjar ayaa magacaabay Taliye kuxigeenka ciidamada Gaarka ah ee Liyuu Police-ka deegaanka Somaalida.
Xilkani ayaa loo magacaabay Kornayl Zakariye oo kamid ahaa saraakiisha dhexe ee ciidanka Liyuu Police-ka kaasi oo aan lagu baranin xiliyadii dhibaatada iyo xasuuqa ba’an ciidamada Liyuugu dadkooda kuhayeen.
Magacaabista Kornayl Zakariye oo kasoo Jeeda Gobolka Shabeele Gaar ahaan degmada Dhanaan ayaa xafiiska madaxwaynaha kasoo baxday maalin kahor, balse ilaa iyo Haatan si rasmi ah warbaahinta mamulka loogama shaacin.
Kornayl Zakariye oo noqonaya sargaalkii 3-aad ee intii Mustaf Joogay loo magacaabo booskan ayaa badalaya Kornayl Shukri Jaamac oo Qaraabada madaxwaynaha ah.
Madaxwayne Mustaf ayaa waxyaabaha lagu Eedeeyo waxaa ugu badan Qabyaalad iyo inuu dhamaan saraakiisha ciidanka Liyuuga kadhigay shakhsiyaad wada beeshiisa ah, kuwaasi oo u badan dambiilayaal xasuuqyo arxandara ah kagaystay deegaanka lamana Garanayo baahida madaxwaynaha ku kaliftay inuu shakhsiyaad isagu ba uu Yaqaano oo dambiyo culus Gaystay inuu u magacaabo xilalka ugu sareeya ciidamada Liyuuga.